मुटु रोग कति प्रकारका हुन्छन ? मुटु रोग लागेको यसरी थाहा पाउन सकिन्छ !! – Samacharpati
पोखरा, ३ भदौ । हृदय रोग भन्नाले धेरैले हृदयघातलाई जोडेर हेर्छन् । यद्यपि हृदयघातका साथै अरु पनि हृदय रोगको प्रकार हुन्छन् । हृदय सम्बन्धी के कस्ता रोग लाग्छन्, त्यसको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ त ?
एरिथमिया एक यस्तो रोग हो, जसमा मुटुको धड्कन अनियमित हुन्छ । एरिथमियाको कारण रोगीको मुटुको धड्कन कहिले सामान्यभन्दा तिब्र हुन्छ भने कहिले सामान्य भन्दा सुस्त पनि । एरिथमिया तब हुन्छ, जब मुटुको धड्कन नियन्त्रण गर्ने इलेक्टि्रक बेव्स ठिक ढंगले काम गर्दैन । मुटुको धड्कन अनियमित हुँदा छाती, गला वा गर्दनमा दुखाई अनुभव हुन्छ ।
अचानक मुटुको धड्कन तिब्र हुन्छ । अचानक मुटुको धड्कन सुस्त हुन्छ । रक्तचाप कम हुन्छ । छातीमा तिब्र दुखाई अनुभव हुन्छ । बोल्नमा कठिनाई हुन्छ । अचानक थकाई लाग्छ । चक्कर लाग्छ । सास लिन गाह्रो हुन्छ । केही क्षणका लागि धड्नक रोकिन्छ र पुन चल्न थाल्छ ।
एथेरोस्क्लेरोसिसको कारण मुटुमा रक्त आपूर्ति कम हुन्छ । मुटुसम्म रगत राम्ररी पुग्न नपाएको कारण रोगीलाई खतरा उत्पन्न हुन्छ । एजेरोस्क्लेरोसिस केही कारणले हुनसक्छ । सामान्यत शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढेमा, इन्सुलिन हर्मोको मात्रा घटेमा, उच्च रक्तचाप, अधिक धुमपान, कम शारीरिक श्रम, अधिक उमेर र अनुवांशिक कारणले हुनसक्छ ।
हात, खुट्टा चिसो हुन्छ । हात, खुट्टामा कम्पन आउन थाल्छ । हात, खुट्टामा कमजोरी महसुष हुन थाल्छ । सास लिन गाह्रो हुन्छ । टाउको दुखाईको समस्या हुन्छ । अनुहार सुन्निएको देखिन्छ । प्यारलाइसेस हुन्छ ।